ချစ်ကြည်အေး: ပိုက်ကွန်တစ်စင်းအတွင်း နေထိုင်ခြင်း
မြတ်နိုးနွယ် Mon Jul 09, 10:07:00 PM GMT+8
ယနေ့ (၁၂)နှစ်မြောက် မင်္ဂလာရက်မြတ်မှသည် ပျော်ရွှင်၊ နားလည်၊ ချစ်ခင်မှုများစွာနဲ့ မင်္ဂလာစိန်ရတု တိုင်ပါစေ။
tin min htet Mon Jul 09, 10:07:00 PM GMT+8
ဘယ်နှယ့် မလိုက်ဖက်ရမှာလဲ။ အချစ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း နုနုနွဲ့နွဲ့လေး ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပေါ့။ ရယ်ရယ်မောမောနဲ့၊ ဆူညံပူညံနဲ့ လည်း အချစ်အကြောင်းရေးလို့ ရပါတယ်။
မောင်သီဟ Mon Jul 09, 10:09:00 PM GMT+8
အာာ အစ်မပြောမှပဲ ကျွန်တော်လည်းတွန့်သွားတယ် ကဗျာဆန်တာ မဆန်တာက လူနဲ့ဆိုင်ပါဖူးဝူးးအစ်မရဲ့း)
ဒါပေမယ့်လေ ဟာသပို့စ်တွေကပိုအသက်ဝင်တယ်သိလားး)း)
အင်္ကျီတွေကို ဆန့်ဆန့်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင် မီးပူတိုက်ရတဲ့အထဲမှာ အချစ်ရှိနေနိူင်တယ်။ (သေချာတာပေါ့ဗျာ)
ညီလင်းသစ် Mon Jul 09, 10:17:00 PM GMT+8
Wow..ဒီပို့စ်ကတော့ နူးညံ့မှုတွေ ယိုစီးလို့ပါလား အမချစ်ကြည်အေးရေ..၊ ဖတ်နေရင်းကို ကြွေကျသွားမှာ စိုးနေရသေးတဲ့ အဖြစ်..၊း) အကြောလျှော့ ရေးထားတာ ဆိုတော့ လက်ကုန် မဟုတ်သေးဘူးလို့ ယူဆရမယ် ထင်တယ်နော်၊
ပိုးကြိုးတွေနဲ့ ရက်ထားတဲ့ ပိုက်ကွန်ကလေးထဲမှာ အမိခံဖို့ စောင့်နေခဲ့တဲ့ အဲဒီ ‘လ’ ကလေးကို မမြင်ဖူးသေးလို့ ‘ရုပ်’ မစွက်တဲ့ စာသက်သက်ကိုပဲ နူးညံ့စွာ ခံစားသွားပါတယ်ဗျာ၊ နားထဲမှာ အခက်ဆုံး ကြိုးတပ်တူရိယာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စောင်းကြိုးရှိုက်သံတွေတောင် ကြားလာရသလိုလို...။း)
သက်ဝေ Mon Jul 09, 10:31:00 PM GMT+8
ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ နွဲ့သဟ လို့ မှတ်ချက် မချသွားဘူး ချစ်........
နှစ်တရာတိုင်ပါစေလို့ ချစ်စွာသော ဆန္ဒမွန်နဲ့ ဆုတောင်းသွားတယ်နော်...း)))
ကြယ်ပြာ Mon Jul 09, 10:43:00 PM GMT+8
အစ်မ ချစ်ကြည် .... ဒီစာလေးကို နှစ်ခြိုက်စွာ ဖတ်သွားပါတယ် အစ်မ ...
မေဇင် Mon Jul 09, 10:59:00 PM GMT+8
ပိုက်ကွန် နဲ့ လလေး ဖွဲ့သွားတာလေး လှလိုက်တာ....နှစ်ကိုယ်တူ ချစ်သမျှ သီချင်းလေး ဖွင့်ပီး ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ရတာ...မိုက်သဗျ...း))
Mon Petit Avatar Mon Jul 09, 11:08:00 PM GMT+8
Happy Anniversary Ma Ma CKA!
အတွေးကမ္ဘာ..မှတ်တမ်း Mon Jul 09, 11:13:00 PM GMT+8
ဒီကွန်မန့်ပေးဖို့ တော်တော်အကြောလျှော့လိုက်ရတယ်..း)) လ ကလေးတွေ၊ ကြယ်ကလေးတွေကပဲ ပိုက်ကွန်ရဲ့ အားစိုက်မှုမှာ ငြိတွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ပိုက်ကွန်အတွင်းကို လကလေးတွေ ကြယ်ကလေးတွေ ရဲ့ အားထုတ်မှု နဲ့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရသည်ဖြစ်စေ၊ အချစ် ဆိုတဲ့ အားထုတ်မှု အရွေ့စွမ်းအင် လေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကွန်ယက်တခု ကို နားလည်မှု ဆိုတဲ့ အတည်စွမ်းအင်လေး နဲ့ အနား ကွတ်လိုက်တော့ အမချစ် ရဲ့ ဒီလောက်လှတဲ့ Post လေးဖြစ်လာတယ်ထင်တယ်။
Mon Petit Avatar Mon Jul 09, 11:19:00 PM GMT+8
I have just listened to your uploaded song in soundcloud.com. I couldn't help but to say again, "Happy Anniversary. Ma Ma CKA."
လသာည Tue Jul 10, 12:25:00 AM GMT+8
ချစ်ခြင်းများ မြဲခိုင်၊ နှစ်တရာတိုင်ပါစေ...နော် အစ်မ
သိင်္ဂါကျော် Tue Jul 10, 02:05:00 AM GMT+8
နှစ်ကိုယ်တူ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာတိုင် ပျော်ရွှင်ပါစေ.. အစ်မ..
အင်ကြင်းသန့် Tue Jul 10, 01:01:00 PM GMT+8
နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေးတွေကိုဖတ်တော့ ရင်ထဲမှာသိမ့်ကနဲတောင် လှုပ်ခတ်သွားမိတယ်....တကယ်.... :)
"အစ်မချစ်နဲ့ကိုကြီး ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင်ပါစေ"
sonata-cantata Tue Jul 10, 01:07:00 PM GMT+8
(ကြားဖူးတာတော့ ကောင်မလေးကလည်း ချစ်နေပါပြီလေ..ဆိုပြီး ဆေးရုံကုတင်ထက်က လူမမာက ပြန်ချစ်လိုက်ရတယ် ဆိုလား...ဘာဆိုလား...;)
-ချစ်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှည်၍ အနာကင်းပါစေ
Cameron Tue Jul 10, 05:39:00 PM GMT+8
ရေးထားတာလေးသိပ်ကောင်းတာပဲ မကြီး...။ ရင်ထဲကထွက်ကျလာတဲ့စကားလုံးတွေမို့ ဖတ်ရတာတောင် ညို့ခံနေရသလားမှတ်ရတယ်။ မကြီးနဲ့ကိုကြီး သက်ဆုံးတိုင်ပျော်ရွှင်ပါစေ...။
အမ်တီအန် Tue Jul 10, 06:07:00 PM GMT+8
Happy Anniversary ပါ အစ်မချစ်ရေ...
နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှတွေက ဒီပို့စ်လေးမှာ အထင်အရှား...
အစ်ကိုကြီးအတွက် နှစ်လည်လက်ဆောင်က အမိုက်စားပို့စ်လေးပေါ့...
ချစ်ခြင်းများဖြင့် ရွှေလက်မခွဲ အမြဲတွဲနိုင်ပါစေ...။
ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) Tue Jul 10, 06:52:00 PM GMT+8
ချစ်ခြင်းရဲ့နူးညံ့ခြင်းကလေးကို တွေ့လိုက်ရတဲ့ခဏ စိတ်တွေလည်းညံ့သက်သွားရတယ် အစ်မရေ.. ဖတ်ရင်း အေးချမ်းမှုလေးတွေရခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
B!tter SwEEt Tue Jul 10, 11:50:00 PM GMT+8
Adora etc. Tue Jul 10, 11:51:00 PM GMT+8
Congrats MaMa. It's so lovely~
ညိုလေးနေ Tue Jul 10, 11:55:00 PM GMT+8
Happy Anniversary Ko Gyi & A Ma Chit :)
ဖိုးတုတ် Wed Jul 11, 01:32:00 PM GMT+8
အမလေးက လှပြီးနုပျိုနေတာက အမရဲ့ချစ်ချစ်ကြီးက အမကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလို.နေမှာပေါ့၊
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Thu Jul 12, 03:51:00 AM GMT+8
အစ်မချစ်ရဲ့ အချစ်အကြောင်းလေးဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ..
အစ်မနဲ့ အစ်ကိုကြီးတို့အချစ်က တကယ်ကို အားကျ ကြည်နူးစရာရယ်။
ချစ်ခြင်းမှာ အစ်မတို့ ၂ယောက်လုံးလည်း တစ်သက်တာ ပတ်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
tharngemama Thu Jul 12, 10:44:00 AM GMT+8
အချစ်ဆိုတာ ပြင်ပ ရုပ်သဏ္ဍာန်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ရင်ထဲက လှပတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တဲ့ ကျွန်မလဲ လှလှပပ ချစ်တတ်ခဲ့တာပေါ့။ အရမ်းကို ခံစားရတယ်.........တကယ်ကောင်းပါတယ်။
Su Thu Jul 12, 08:41:00 PM GMT+8
လက်သီးပြင်းတဲ့ မဂျီးချစ် ပိုက်ကွန်ရက်ရင်းပြုံးနေတဲ့ပုံကိုမြင်ယောင်ပီး အဟီးလို့အသံထွက်သွားပါတယ်
နှစ်တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်တိုင်ပါစေ အမချစ်နဲ့ အမအချစ်
kay Thu Jul 12, 10:01:00 PM GMT+8
မချစ်..စာအုပ်ထုပ်ရင်..စီဒီချပ်ကလေးပါ..တွဲ ထုတ်နော်။ ( TOEFL တို့ IELS စာအုပ်တွေလို မျိုး..)း)))
kkylay Fri Jul 13, 07:44:00 PM GMT+8
မိစံ Wed Jul 17, 11:50:00 PM GMT+8
တွဲတင်သင့်တာ ..း)